Faah faahin: Al-Shabaab oo isku ballaarisay deegaano ka tirsan Eyl iyo Garacad ee Puntland: | Gaaloos.com
Home » News » Wararka » Faah faahin: Al-Shabaab oo isku ballaarisay deegaano ka tirsan Eyl iyo Garacad ee Puntland:
Faah faahin: Al-Shabaab oo isku ballaarisay deegaano ka tirsan Eyl iyo Garacad ee Puntland:
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ururka Al-Shabaab kula wareegeen deegaano ka tirsan Puntland, gaar ahaan deegaano hoostaga degmooyinka Garacad iyo Eyl oo ah deegaan xeebeed.
Ku dhowaad kun askari oo dhinaca bariga iyo badda ku socda ayaa shalay gelinkii danbe la wareegay degmada Garacad, inkastoo markii danbe saakay waaberigii kasoo gudbeen, soona gaaray halka lagu magacaabo Kulub oo 10 km u jirta Garacad iyo Garmaal oo ka tirsan gobolka Nugaal.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in maliishiyadaan oo ku hubeysan qoryaha daran dooriga u dhaca sida BKM, qoryaha garbaha laga tuuro iyo bambooyin, mana jirto dhibaato ay dadka deegaanka u geysteen.
Warku wuxuu intaa ku darayaa in maliishiyadaan ay deegaanadaasi safar ku yihiin yoolkooduna yahay in ay gaaraan xeebaha bari ee Boosaaso, halkaasi oo ay ku sugan yihiin dagaalyahano horay ugu tirsanaa, balse ku biiray ururka Daacish.
Xukuumadda Puntland ayaa ku dhawaaqday in maliishiyadaan ay dhinaca koonfurta Soomaaliya ugu yimaadeen, ujeedaduna tahay in lagu car qaladeeyo deganaanshaha Puntland.
Wasiirka amniga Puntland, Cabdi Xersi Qarjab ayaa ku eedeeyay dowladda Federaalka in ay wax ka og tahay qorshahaan duulaanka Al-Shabaab kusoo qaaday Puntland, wuxuuna sheegay in ay iska difaaci doonaan. Sidoo kale maamulka Somaliland ayuu soo hadal qaaday in dhankooda carqaladeynayaan deganaanshaha Puntland.
Title: Faah faahin: Al-Shabaab oo isku ballaarisay deegaano ka tirsan Eyl iyo Garacad ee Puntland: